SomaliTalk.com » 2012 » April » 09
Home » Archive Maalinta April 9th, 2012
Madaxweynaha Dawladda ku Meel Gaarka Soomaaliya Shiikh Shariif ayaa Xarunta Madaxtooyada ee Magaalada Muqdisho kula kulmay waxgarad iyo Odoyaal Dhaqameed ka soo jeeda Beelaha digil iyo Mirifle.Kulankan uu Madaxweynaha la yeeshay odoyaashaas ayaa ahaa mid looga hadlay guud ahaan sidii dalka Soomaaliya Nabad loogu soo dabaali lahaa gaar ahaana Gobolada ay Odoyaashaasi ka soo jeedaan. Shariif ayaa xusay...
Xildhibaan ka Tirsan Baarlamanka oo soo Dhaweeyay Bayaankii ka soo Baxay Maamulka SomaliLand ee lagu Magacaabey Guddigii Soomaaliland ee la Xaajoon lahaa Dowladda Federaalka
Xildhibaan Daahir Jeesow oo ka tirsan Mudanayasha Barlamanka ku meel gaarka Soomaalaiya ayaa ka hadalay hadalkii dhawaan ka soo yeeray Maamulka Soomaali land ee ahaa in ay magacaabeen Guddi wada hadal. Xildhibaanka ayaa sheegey in ay tahay fikrad wanaagsan in maanta Somali land oo muddo 20 Sana ah sheeganaysey in ay ka go’day Soomaaliya inteeda kale ay maanta isu soo diyaariso in ay wada hadal la...
AL-Shabaab iyo Kimistari (Chemistary) !!!!!
Sharaxa Cinwaanka : Cinwaanka Maqaalkaan Wuxuu igu soo dhacay markaan Idaacad Afka Soomaaliga ku hadasha Aan ka Maqlay in Ciidamada Dawladda ay Weerar ku Qaadeen Jaamicad Muqdisho ku taal ayagoo raadinayaa, Macallin Jaamicadaas ka shaqeeya oo Maadada Kimiatariga dhiga oo Logan Shakiyey in uu yahay mid shabaab ah ama Shabaab fikradooda u janjeera. Markaas Ayaa markiiba ay igu soo dhacay Maqaalkaan Aan...